Hordhac: Villarreal vs Barcelona - Koeman Oo Raadinaya Guul Uu Kula Sinnaado Real Madrid & Villarreal Oo Wax Badan Kaga Xidhan Yihiin Saddexda Dhibcood Ee Kulankan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHordhac: Villarreal vs Barcelona – Koeman Oo Raadinaya Guul Uu Kula Sinnaado Real Madrid & Villarreal Oo Wax Badan Kaga Xidhan Yihiin Saddexda Dhibcood Ee Kulankan
Hordhac: Villarreal vs Barcelona – Koeman Oo Raadinaya Guul Uu Kula Sinnaado Real Madrid & Villarreal Oo Wax Badan Kaga Xidhan Yihiin Saddexda Dhibcood Ee Kulankan
Barcelona ayaa safar ku tegaysa garoonka Estadio de la Ceramica oo ay marti ugu noqonaysa Villarreal ciyaar aad muhiim ugu ah oo guul ay kasoo gaadhaan ay ka caawin doonto in ay soo qabato Real Madrid oo labaad fadhida, iyadoo waliba hal ciyaar ahi baaqi u tahay.
Barca oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa shan dhibcood ka dambaysa Atletico oo hoggaanka haysa, waqti dambe oo caawa ahna ciyaaraysa, halka Real Madrid oo labaad ku jirtana ay saddex dhibcood ka dambeeyaan, laakiin haddii ay guuleystaan, waxay awood u yeelanayaan in ay la sinmaan Madrid oo xalay barbarro gashay, xilli ay waliba saddex dhibcood oo kale ka hormari karaan maadaama ay ciyaar kale baaqi u tahay.
Villarreal ayaa iyaduna u baahan guul ay kusoo gasho kaalinta shanaad ee horyaalka LaLiga, iyadoo ka soo hormari doonta Real Sociedad oo ciyaar baaqi u tahay iyo Real Betis oo leh min 50 dhibcood, waxaana saddexda dhibcood ay ka caawin doonaan in ay kasoo muuqdaan tartanka Europa League ee xilli ciyaareedka dambe.
Kooxda garoonkeeda joogta ee Villarreal oo uu tababare u yahay macallinka caanka ah ee Unai Emery ayaa waxa uu isbeddel badan ku sameeyey naadigaas, isagoo ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican, taas oo walwal ku haysa Barcelona.
Emery oo ay kooxdiisu taagan tahay semi-finalka Europa League oo ay Khamiista la ciyaari doonto Arsenal, ayaa 15kii ciyaarood ee ugu dambeeyey xilli ciyaareedkan ee horyaalka LaLiga, waxay badiyeen lix kulan, lix barbarro ah iyo saddex laga badiyey.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa jidka guusha kusoo laabatay kulankii Getafe ee toddobaadkii hore, iyagoo soo geystay xasuuq 5-2 ah oo laba ka mid ah goolasha uu dhaliyey Lionel Messi. Guushan ayaa beddeshay khasaarihii Real Madrid ay ugu geysatay Alfredo Di Stefano 10kii bishan April, waxaase uga dambaysay farxaddii guusha koobka Copa del Rey ee ay 4-0 kaga qaadeen Athletic Bilbao.
Wali shaqo badan ayaa u taalla kooxda reer Catalonia haddii ay doonayaan in ay horyaalka ku guuleysan karaan, waana in ay soo yareeyaan farqiga shanta dhibcood ah ee ay Atletico ka horreyso isla maanta, haddii kale mugdi ayuu xilli ciyaareedkoodu geli doonaa.
Ronald Koeman ayaanay kooxdiisu ku jirin tartamada kale oo dhan, waxaanay kasoo hadheen Champions League, laakiin shaqada ugu weyn ee u taallaa waa in ay Atletico Madrid saddexda dhibcood ka qaataan kulankooda horyaalka ee May 8.
Ciyaarta: Villareal vs Barcelona
Villarreal waxa ka maqan Vicente Iborra oo dhaawac ah iyo Pervis Estupinan oo jug kasoo gaadhay muruqa ay u badan tahay in aanu kasoo kabanin saacadaha kooban ee hadhay.
Yellow Submarine ma jirto wax walaac ah oo kale oo ka haysata ciyaartoydeeda, waxaana la filayaa in isbeddel yar ay ku sameeyaan safkii ay kula ciyaaareen Alaves Khamiistii.
Sergino Asenjo iyo Juan Foyth ayaa shaxda koowaad kasoo muuqan doona, sidoo kalena difaaca birta ah ee Pau Torres ayaa isaguna halgan la geli doona weerarka Barcelona.
Dhinaca kale, Barca waxa ka maqan Ansu Fati iyo Philippe Coutinho oo labaduba dhaawac ah, waxaase isaguna soo kaban waayey Martin Braithwaite oo la fialyay in uu dhibato kuraanta kasoo gaadhay kasoo kaco ka hor ciyaartan.
Goolhayaha labaad ee Neto ayaa kasoo kacay dhaawac muddo qaatay, sidoo kalena weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele ayaa lagu soo daray liiska kooxda kaddib ciyaartii Getafe oo uu dhaawac ku maqnaa.